Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah / Shuruudaha & Xaaladaha – Tailoress The
Tailoress-ka waxaa ka go'an inay ilaaliso arimahaaga gaarka ah. Nala soo xiriir haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama dhibaatooyin ah oo ku saabsan adeegsiga Xogtaada Shakhsiyeed oo aan si farxad leh kuu caawin doonno.
Adoo adeegsanaya boggan ama / iyo adeegyadeenna, waxaad ogolaatay in laga baaraandego Macluumaadkaaga Shakhsiyeed sida lagu sharaxay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Qeexitaannada loo adeegsaday Siyaasaddan
Mabaadi'da ilaalinta xogta ee aan raacno
Maxaad xuquuqda aad ku leedahay ee ku saabsan Macluumaadkaaga Shakhsiyeed
Macluumaadka Shakhsiyeed ee aan kaa aruurinno adiga
Sida aan u isticmaalno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed
Yaa kale oo marin u leh macluumaadkaaga shakhsiyeed
Sida aan xogtaada u sugno
Xogta Shakhsiyeed - wixii macluumaad ah ee la xiriira qof dabiici ah oo la aqoonsan yahay ama la aqoonsan karo.
Hawlaha - hawlgal kasta ama hawlgal kasta oo lagu sameeyo Xogta Shakhsiyeed ama noocyada macluumaadka shakhsiyeed.
Mawduuca xogta – qof dabiici ah oo Xogtiisa Shakhsiyeed la shaqeynayo.
Child – qof dabiici ah oo ka hooseeya 16 da'da.
Annaga / annaga (ama waa la weyneeyay ama maya) - Dawaarka dharka
Mabaadi'da Ilaalinta Macluumaadka
Waxaan ballanqaadeynaa inaan raacno mabaadi'da ilaalinta macluumaadka soo socda:
Ka shaqeynta waa sharci, cadaalad ah, hufan. Hawlaheena Waxqabadka waxay leeyihiin sababo sharci ah. Waxaan marwalba tixgelinaa xuquuqdaada kahor Falanqaynta Xogta Shakhsiyeed. Waxaan ku siin doonaa macluumaad ku saabsan Ka baaraandegista markii la codsado.
Hawlgalku wuxuu ku kooban yahay ujeeddada. Hawlahayaga Hawlaha waxay ku habboon yihiin ujeeddada loo uruuriyay Xogta Shakhsiyeed.
Ka shaqeynta waxaa lagu sameeyaa xog yar. Waxaan kaliya aruurineynaa oo aan ka baaraandegnaa xaddiga ugu yar ee Xogta Shakhsiyeed ee looga baahan yahay ujeedo kasta.
Hawlgalku wuu xadidan yahay wakhti go'an. Ma keydin doonno macluumaadkaaga shakhsiyeed muddo ka badan intii loo baahnaa.
Waxaan ku dadaali doonaa inaan hubino saxnaanta xogta.
Waxaan ku dadaali doonnaa sidii aan u hubin lahayn kalsoonida iyo qarsoodiga xogta.
Xuquuqda Mawduuca Xogta
Mawduuca Xogta wuxuu leeyahay xuquuqda soo socota:
Xaq u lahaanshaha macluumaadka - macnaha waa inaad xaq u leedahay inaad ogaato in macluumaadkaaga shaqsiyeed la shaqeynayo iyo in kale; wixii xog ah ee la uruuriyay, meesha laga helo iyo sababta iyo cidda laga shaqeynayo.
Xaqa helitaanka - macnaha waxaad xaq u leedahay inaad hesho xogta lagasoo ururiyay / adiga kugu saabsan. Tan waxaa ka mid ah xuquuqda aad u leedahay inaad codsato oo aad hesho nuqul ka mid ah Xogtaada Shakhsiyeed ee la ururiyey.
Xuquuqda saxitaanka - macnaha waxaad xaq u leedahay inaad codsato sixitaan ama tirtirida Macluumaadkaaga Shakhsiyeed oo aan sax ahayn ama aan dhameystirnayn.
Xuquuqda in la tirtiro - oo macnaheedu yahay duruufaha qaarkood waxaad codsan kartaa in macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed laga tirtiro diiwaankayaga.
Xaq u lahaanshaha xaddidaadda ka shaqeynta - taasoo la micno ah marka shuruudo gaar ahi ay khuseeyaan, waxaad xaq u leedahay inaad xakameyso Nidaamka Xogtaada Shakhsiyeed.
Xaqa aad u leedahay inaad diidid ka shaqeynta - taasoo la micno ah xaaladaha qaarkood waxaad xaq u leedahay inaad diido ka shaqeynta Macluumaadkaaga Shakhsiyeed, tusaale ahaan suuq geynta tooska ah.
Xaqa aad u leedahay inaad ka dhiidhiso howsha otomaatigga ah - taasoo la micno ah inaad xaq u leedahay inaad diido howsha otomaatiga ah, oo ay ka mid tahay muujinta; iyo in aan loo hoggaansamin go'aan ku saleysan oo keliya Is-gaarsiinta otomaatiga ah. Xuquuqdaan waad jimicsi kartaa markasta oo ay jirto natiijada ka soo baxda soo saarista oo soo saarta saameyn xagga sharciga ah oo ku saabsan ama si weyn kuu saameysa.
Xuquuq u lahaanshaha macluumaadka - waxaad xaq u leedahay inaad ku hesho Macluumaadkaaga Shakhsiyeed qaab mashiin-akhrin kara ama haddii ay macquul tahay, sida wareejinta tooska ah ee hal Processor loogu wareejiyo mid kale.
Xaqa aad u leedahay inaad ku xareyso cabasho - haddii ay dhacdo inaan diidno codsigaaga sida ku xusan Xuquuqda Helitaanka, waxaan kuusiin doonaa sabab sababta. Haddii aadan ku qanacsanayn sida loo maareeyay codsigaaga fadlan nala soo xiriir.
Xaq u leh caawimaadda maamulka kormeerka - macnaheedu waa inaad xaq u leedahay caawimaadda hay'adda kormeerka iyo xaquuqda daaweyn kale ee sharci sida sheegashada magdhow.
Xaq ayaad u leedahay inaad ka laabato oggolaanshaha - waxaad xaq u leedahay inaad ka laabato wixii oggolaansho ah ee la siiyay ee Ku saabsan Ka Shaqeynta Xogtaada Shakhsiyeed.
Xog aan ururinno
Macluumaadka aad na siisay
Tani waxay noqon kartaa cinwaanka emaylkaaga, magac, cinwaanka biilasha, cinwaanka guriga iwm - badanaa macluumaadka lagama maarmaanka u ah bixinta alaab / adeeg ama si kor loogu qaado khibradaada macaamiisha aad nala leedahay. Waxaan keydineynaa macluumaadka aad na siisay si aad uga faallooto ama aad waxqabadyo kale ugu qabato bogga. Macluumaadkan waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, magacaaga iyo cinwaanka emaylkaaga.
Macluumaadka si otomaatig ah ayaa lagaa ururiyaa adiga
Tan waxaa ka mid ah macluumaadka si otomaatig ah loogu kaydiyo cookies iyo qalab kale oo kalfadhi ah. Tusaale ahaan, macluumaadka gaadhigaaga wax iibsiga, cinwaankaaga IP, taariikhda wax iibsigaaga (haddii ay jiraan) iwm. Macluumaadkan waxaa loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo khibradaada macaamiisha. Markaad isticmaasho adeegyadeena ama aad eegto waxyaabaha ku jira degelkeenna, hawlahaaga ayaa laga yaabaa inay gasho.
Macluumaadka dadweynaha laga heli karo
Waxaan ururin karnaa macluumaadka adiga kugu saabsan oo si guud loo heli karo.
Waxaan u isticmaalnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed si aan u:
adeegyadeenna kuu fidinno. Tan waxaa ka mid ah tusaale ahaan diiwaangelinta koontadaada; ku siinaya alaabo iyo adeegyo kale oo aad codsatay; ku siin doona waxyaabo xayeysiis ah markaad codsato oo aan kula soo xiriiro adiga oo la xiriira alaabada iyo adeegyadaas; kula xiriiro iyo kula macaamil; iyo ku ogeysiintaada isbeddelada ku yimaada adeegyada.
wanaaji khibradaada macaamiisha;
gudan waajibaadka sharciga ama qandaraaska;
Waxaan u isticmaalnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed sababo sharci ah iyo / ama Oggolaanshahaaga.
Iyada oo ku saleysan sababo la xiriira qandaraas ama gudashada waajibaadka qandaraaska, Waxaan ku shaqeyneynaa Macluumaadkaaga Shakhsiyadeed ujeedooyinka soo socda:
si laguu aqoonsado;
inuu ku siiyo adeeg ama inuu kuu soo diro / kuugu deeqo wax soo saar;
si aad ula xiriirto ama iibinta ama qaansheegadka;
Ku saleysan danaha sharciga ah, Waxaan ku shaqeyneynaa Macluumaadkaaga Shakhsiyadeed ujeedooyinka soo socda:
inaan kuu soo diro dalabyo shaqsiyeed * (annaga iyo / ama la-hawlgalayaashayada si taxaddar leh loo xushay);
si loo maamulo loona falanqeeyo saldhiga macmiilkeena (dhaqanka iyo taariikhda wax iibsiga) si kor loogu qaado tayada, kala duwan, iyo helitaanka alaabada / adeegyada la bixiyo / la bixiyo;
si loo sameeyo su'aalo ku saabsan qanacsanaanta macmiilka;
Ilaa iyo intaad si kale noogu soo wargelin, Waxaan tixgelineynaa inaan ku siino alaab / adeegyo la mid ah ama la mid ah taariikhda wax iibsigaaga / dabeecadda daalacashada inay tahay dantayada sharciga ah.
Oggolaanshahaaga waxaan ku shaqeyneynaa Macluumaadkaaga Shakhsiyadeed ujeedooyinka soo socda:
inaan kuu soo diro joornaalada iyo dalabyada ololaha (annaga iyo / ama la-hawlgalayaashayada si taxaddar leh loo xushay);
Ujeeddooyinka kale ayaan weydiisannay oggolaanshahaaga;
Waxaan u shaqeyneynaa Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed si aan u gudanno waajibaadka ka soo baxaya sharciga iyo / ama u adeegsanno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed xulashooyinka uu sharcigu bixiyo. Waxaan xaq u leenahay inaan qarinno Xogta Shakhsiyeed ee la ururiyey iyo inaan isticmaalno xog kasta oo noocaas ah. Waxaan u isticmaali doonnaa xogta ka baxsan baaxadda Nidaamkan keliya marka aan la magacaabin. Waxaan keydineynaa macluumaadkaaga biilka iyo macluumaadka kale ee lagaa soo ururiyey adiga illaa inta loogu baahan yahay ujeedooyin xisaabeed ama waajibaadka kale ee sharciga ka soo baxa..
Waxaan u shaqeyn karnaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed ujeeddooyin dheeri ah oo aan halkan lagu sheegin, laakiin waxay ku habboon yihiin ujeeddada asalka ah ee xogta loo soo ururiyay. Si tan loo sameeyo, waan xaqiijin doonaa taas:
xiriirka ka dhexeeya ujeedooyinka, Macnaha guud iyo nooca Xogta Shakhsiyeed waxay ku habboon tahay sii socodsiinta;
Nidaamka dheeraadka ahi waxba uma dhimayso danahaaga iyo
waxaa jiri lahaa ilaalin ku habboon Hawlaha.
Waxaan kula socodsiin doonnaa wixii ku saabsan Nidaamyada iyo ujeeddooyinka dheeriga ah.
Yaa kale oo marin u heli kara Macluumaadkaaga Shakhsiyeed
Lama wadaagno Xogtaada Shakhsiyeed shisheeyaha.
Waxaan kaliya la shaqeynaa wada-hawlgalayaasha Processing-ka kuwaas oo awood u leh inay hubiyaan heer ku filan oo ilaalin kara macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waxaan u siideynaa Macluumaadkaaga Shakhsiyeed dhinacyada saddexaad ama saraakiisha dowladda markii si sharci ah ay nagu waajib tahay inaan sidaas sameyno. Waxaa laga yaabaa inaan u siidino Macluumaadkaaga Shakhsiyeed dhinacyada saddexaad haddii aad ogolaatay ama haddii ay jiraan sababo kale oo sharci ah.
Waxaan ku dadaalaynaa inaan xafidno Macluumaadkaaga Shakhsiyeed. Waxaan u isticmaalnaa hab maamuus nabdoon isgaarsiinta iyo gudbinta xogta (sida HTTPS). Waxaan u isticmaalnaa magac-u-dhigid iyo magac-u-sheegis la'aan meesha ku habboon. Waxaan kormeernaa nidaamyadeenna u nuglaanta iyo weerarada suurtagalka ah.
In kasta oo aan sida ugu fiican isku dayno haddana dammaanad kama qaadi karno amniga macluumaadka. Si kastaba ha noqotee, waxaan balan qaadeynaa inaan u sheegno masuuliyiinta ku haboon jabinta xogta. Waxaan sidoo kale ku soo wargelin doonaa haddii ay jirto khatar ku saabsan xuquuqdaada ama danahaaga. Waxaan sameyn doonnaa wax walba oo macquul ah si aan uga hortagno khalkhal gelinta amniga iyo caawinta mas'uuliyiinta haddii wax xadgudub ah ay dhacaan.
Haddii aad koonto nagula leedahay, Ogsoonow inaad tahay inaad asturto magacaaga isticmaale iyo lambarkaaga sirta ah.
Uma jeedno inaan ka uruurinno ama ka ogaanno macluumaadka carruurta. Ma bartilmaameedsanayno carruurta adeegyadayada.
Kukiyada iyo teknoolojiyada kale ee aan isticmaalno
Waxaan u adeegsannaa cookies iyo / ama teknoolojiyad la mid ah si aan u falanqeyno dhaqanka macaamiisha, maamul websaydhka, raad isticmaalayaasha’ dhaqdhaqaaqa, iyo in la ururiyo macluumaadka ku saabsan isticmaalayaasha. Tan waxaa loo sameeyaa si loo shakhsiyeeyo korna loogu qaado khibradaada aad nala leedahay.
Cookie waa fayl qoraal yar oo ku kaydsan kombuyuutarkaaga. Kukiyada waxay keydiyaan macluumaadka loo isticmaalo in lagu caawiyo in bogagga ay shaqeeyaan. Kaliya waxaan heli karnaa cookies-ka ay abuureen degelkeenna. Waad ku xakameyn kartaa cookies-kaaga heerka biraawsarka. Xulashada joojinta buskudka waxay caqabad ku noqon kartaa adeegsiga howlaha qaarkood.
Waxaan u adeegsanaa cookies ujeedooyinka soo socda:
Kukiyada loo baahan yahay - buskudyadan ayaa looga baahan yahay inaad awood u leedahay inaad ku isticmaasho waxyaabo muhiim ah oo ku saabsan websaydhkeena, sida gelitaanka. Kukiyadaani ma ururiyaan macluumaad shakhsiyeed.
Kukiyada waxqabadka - kukisyadani waxay bixiyaan waxqabad ka dhigaya adeegsiga adeegyadeena mid aad u sahlan oo ka dhigaya bixinta qaabab shakhsi ahaaneed oo macquul ah. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay ku xasuustaan ​​magacaaga iyo emaylka foomamka faallooyinka sidaa darteed uma baahnid inaad dib u gasho macluumaadkan marka xigta markaad faallo bixinayso.
Kukiyada falanqaynta – cookies-kan waxaa loo isticmaalaa si loola socdo isticmaalka iyo waxqabadka websaydhka iyo adeegyada
Kukiyada xayeysiinta – buskudkan waxaa loo isticmaalaa in lagu gaarsiiyo xayaysiisyada adiga kugu habboon iyo danahaaga. Intaa waxaa dheer, waxaa loo isticmaalaa in lagu xadido tirada jeer ee aad xayeysiin aragto. Badanaa waxaa lagu meeleeyaa websaydhka shabakadaha xayeysiinta iyada oo la oggol yahay hawlwadeenka degelka. Kukiyadaani waxay xasuustaan ​​inaad booqatay degel macluumaadkaan waxaa lala wadaagayaa ururo kale sida xayeysiiyaasha. Badanaa beegsiga ama xayeysiinta kukiyada waxay ku xirnaan doontaa shaqeynta goobta ay bixiso hay'ada kale.
Waad ka saari kartaa cookies-ka ku keydsan kumbuyuutarkaaga adoo adeegsanaya goobaha biraawsarkaaga. Haddii kale, waad xakamayn kartaa qaar ka mid ah cookies-ka xisbiga 3aad adoo adeegsanaya aaladda kor u qaadista arrimaha gaarka ah sida optout.aboutads.info ama youronlinechoices.com. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan cookies, booqasho allaboutcookies.org.
Waxaan u adeegsanaa Google Analytics inaan ku cabirno taraafikada boggayaga. Google waxay leedahay siyaasad gaar ah oo u gaar ah oo aad dib u eegi karto halkan. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka baxdo raadinta Google Analytics, booqo Bogga ka bixida Google Analytics.
Waxaan xaq u leenahay inaan ku badalno Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Wax ka beddelkii ugu dambeeyay waxaa la sameeyay May 3, 2018.
Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an “AS IS” iyo “AS AVAILABLE” basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.